भारतले श्रावस्ती जिल्लास्थित पिप्रहवामा बौद्ध स्थलमा ‘नक्कली लुम्बिनी’ निमार्ण गरेको चर्चा चारैतिर छ । अहिले पनि ‘नक्कली लुम्बिनी’ भन्दै पिप्रहवाको तस्वीर देखाइन्छ। ‘नक्कली लुम्बिनी’ वा ‘नक्कली कपिलवस्तु’ हेर्न जाने र भारतविरुद्ध द्वेषभाव राख्नेहरूको संख्या पनि ठूलै छ।
वास्तवमा पिप्रहवाको अध्ययन–अनुसन्धान वा निर्माण लुम्बिनीको नाममा भइरहेको छैन। यसलाई भारतले प्राचीन राज्य ‘कपिलवस्तु’ मान्दै आएको छ र नेपालका विषयविज्ञहरू त्यसैमा बेखुस भइरहेका छन्। २५ सय वर्षअघिको कपिलवस्तु राज्य अहिलेको नेपाल र भारतमा फैलिएको तथ्य नबुझ्नु नै समस्या बनेको छ। खासमा, जर्मन पुरातत्वविद् डा. ए. फुहररले सन् १८९५ मा निग्लिहवामा अशोकस्तम्भ भेटेको घटनालाई प्राचीन कपिलवस्तुको पहिलो प्राप्ति मान्नुपर्छ। त्यसअघि आ–आफ्नो सुविधा अनुसार विभिन्न स्थललाई कपिलवस्तु मानिंदै आएको थियो।
प्राचीन कपिलवस्तु विभिन्न नगर मिलेर बनेको शाक्य गणराज्य थियो। आजभोलि कपिलवस्तु भन्दै नेपाल र भारतले प्रस्तुत गर्ने अवशेषहरू प्राचीन कपिलवस्तुको कुनै हिस्सा मात्र भएको बुझ्न गाह्रो छैन। नेपालले कपिलवस्तु भनेर तिलौराकोट अनि भारतले पिप्रहवा–गनवरिया क्षेत्रलाई देखाउने गरेको छ। यो भनेको हनुमानढोका वा स्वयम्भूमध्ये कुन चाहिं काठमाडौं हो भनेर झगडा गर्नु जस्तै हो। त्यस्तै, बुद्धको जन्म नेपालमा भएको भन्दैमा ‘नक्कली लुम्बिनी’ वा ‘नक्कली कपिलवस्तु’ भन्दै पिप्रहवाको पुरातात्विक महत्तालाई नमान्नु अज्ञानता हो। कम्तीमा स्तूपलगायतका स्मारकहरूको वन्दना गर्ने नेपाली बौद्धहरूले पिप्रहवा प्राचीनता र धर्म दुवै दृष्टिले महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल हो भनेर बुझ्नुपर्छ।
बुद्धत्व प्राप्तिपछि गौतम बुद्ध गृहनगर कपिलवस्तु आउँदा निग्रोधाराममा बसेको प्रसंग प्रसिद्ध छ। निग्रोध शाक्यले आफ्नो जग्गामा बुद्धलाई बस्ने बन्दोबस्त गरेकोले निग्रोधाराम भनिएको हो। जन्मस्थलतिर आउँदा बुद्ध बस्ने यो विहारको नाम बौद्ध वाङ्मयमा मनग्गे उल्लेख भएको छ। बुद्धको महापरिनिर्वाणपछि पनि सयौं वर्षसम्म यस विहारमा बौद्ध भिक्षुहरू बस्थे। नेपाली बौद्धहरू भने कुदानको पुरातात्विक अवशेष नै निग्रोधाराम हो भन्ने मान्यता राख्दछन्, तर त्यसलाई प्रमाणित गर्ने दरिलो प्रमाण पेश गर्न सक्दैनन्।